भिआइपिले कहाँ–कहाँबाट गरे मतदान ? « News of Nepal
भिआइपिले कहाँ–कहाँबाट गरे मतदान ?
नेपाल समाचरापत्र, काठमाडौ ।
आम निर्वाचन सुरु हुनासाथ देशका विभिन्न चुनाव क्षेत्रबाट शीर्षनेताहरुले मतदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट मतदान गर्दैछन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवनबाट मतदान गरेका छन ।
त्यसैगरी अन्य नेताहरुले पनि मतदान गरिरहेका छन् । झापा क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार एवं कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भद्रपुरस्थित बलवलगुढी प्राथमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
बुटवल बेलहिया सडक निर्माणमा कार्यरत सुपरभाईजरको
घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका डीएसपीलाई
जनयुद्धमा लागेको आरोपमा जन्म कैद, परिवारको